Manchester City oo Bareejo Lagu Celiyay iyo Kooxaha Arsenal iyo Stoke oo Guulo Gaaray “Sawirro” – Radio Muqdisho
Manchester City oo Bareejo Lagu Celiyay iyo Kooxaha Arsenal iyo Stoke oo Guulo Gaaray “Sawirro”
Kooxda Manchester City ayaa garoonkeeda Etihad Stadium barbardhac 2-2 ah kula gashay kooxda Burnley.
Kooxda Manchester City ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 23-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan David Silva.
Ciyaaryahan Fernandinho ayaa daqiiqadii 34-aad ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Manchester City,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan George Boyd ayaa bilowgii qeybtii danbe ee ciyaarta gool u dhaliyay kooxda Burnley.
Ciyaaryahan Ashley Barnes ayaa daqiiqadii 81-aad ee ciyaarta goolka labaad ee barbardhaca u dhaliyay kooxda Burnley.
Kooxda Manchester City ayaa ka faa’ideysan waysay barbardhacii ay gashay kooxda Chelsea,waxana ay iska qasaarisay fursad ay hal dhibic u jirsan lahayd kooxda Chelsea.
Kooxda Manchester City ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta labaad,waxana ay leedahay 43-dhibcood,halka kooxda Burnley ay ka mid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseeya.
Kooxda West Ham United ayaa kulankii London derby waxa garoonkeeda Upton Park 1-2 uga badiyay kooxda Arsenal.
Kooxda Arsenal ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 41-aad ee ciyaarta gool rigoore ah u dhaliyay ciyaaryahan Santi Cazorla.
Ciyaaryahan Danny Welbeck ayaa dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Arsenal,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Cheikhou Kouyate ayaa bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta goolka kaliya u dhaliyay kooxda West Ham United.
Kooxda Arsenal ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska ka soo gashay shanaad,waxana ay leedahay 33-dhibcood,halka kooxda West Ham United ay u dhaadhacday kaalinta kaalinta lixaad,iyadoo leh 31-dhibcood.
Kooxda Stoke City ayaa garoonkeeda Britannia Stadium 2-0 uga badisay kooxda West Bromwich Albion.
Ciyaaryahan Mame Biram Diouf ayaa bilowgii danbe ee ciyaarta labo gool u dhaliyay kooxda Stoke City.
Kooxda Stoke City ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska ka soo gashay kaalinta tobanaad,waxana ay leedahay 25-dhibcood,halka kooxda West Bromwich Albion ay horyaalka uga jirto kaalinta 16-aad,iyadoo leh 17-dhibcood.
Kooxda Hull City ayaa waxaa garoonkeeda KC Stadium 0-1 uga badiyay kooxda Leicester City.
Ciyaaryahan Riyad Mahrez ayaa daqiiqadii 33-aad ee ciyaarta goolka guusha u dhaliyay kooxda Leicester City.
Kooxda Hull City ayaa horyaalka uga jirto kaalinta 17-aad,waxana ay leedahay 16-dhibcood,halka kooxda Leicester City ay ka mid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseeyo.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo Maser u ambabaxay